နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်ဇင်မာအောင်နဲ့ ဂျာမနီ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး – PVTV Myanmar
ဇန်နဝါရီ ၂၁ ၊ ၂၀၂၂
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်နဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဖြစ် သူ Dr. Tobias Lindner တို့ ဒီနေ့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်ဇင်မာအောင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှု တွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ အခြေအနေတွေ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမူရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နေမှုတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန် ချက်မှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
“There arealot of defectors in the military. Military personnel themselves, you know, do not believe their leadership. So it hasavery huge impact(on them). It’s one of the indicators how much impact the military coup has on its own institutions. Even the military, soldiers, officials do not support the military coup .. And people now very much realize why we need the military out of politics; why we need the military to be professionalized … how important it is for the military not to inte
နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ခိုလှုံခွင့်ပေးကြဖို့အတွက် အမေ ရိကန်သမ္မနဲ့ တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတတို့က ပူးတွဲကြေညာ
Han Lin Thant says:
2022-01-21 at 9:31 PM
မြန်မာငွေ တစ်သိန်းကျပ် နီးနီးရမယ့် website လေးရှိတယ်ညေးတို့ရေ။ ငွေထည့်စရာမလိုဘူးနော်။လုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်အတွက်အမြတ်ချည်းဘဲ။
San Jay Naidu says:
2022-01-21 at 9:32 PM
Shar Core says:
2022-01-21 at 9:33 PM